Ihe kacha mma 24 Compass Tattoos Echiche Ebumnuche Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ihe kacha mma 24 kompas Tattoos Echiche Echiche Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị
Egbu egbugbere ọnụ bụ àgwà a ma ama nke dịworo adị kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a. Ndị ọrụ ụgbọ mmiri ejiriwo ihe ịrịba ama ụgbọ mmiri jiri ọtụtụ afọ mee ihe n'ihi na ha kwenyere na ọ ga-enyere ha aka ịlanarị mmiri na-asọ asọ ma hụ na ha ga-alaghachi n'enweghị nsogbu.
Ntuba Ụdị Pọọpọ Kọmpụ
Otu n'ime ihe ndị mere mmadụ ji aga igbu egbu bụ n'ihi ihe ọ na-anọchi anya ya. Egwuregwu a na-egbu egbu nwere ụdị dị iche iche ma ndị nọ n'elu mmiri, ọ bara ezigbo uru. Ọ pụtara akara nke ọdịmma, nchebe na nkwado. Ọnwụ ahụ na-abịa n'ọtụtụ ọdịiche na ụdị. E nwere ụdị mpempe akwụkwọ ndị a nke nwere nkọwa dị ukwuu nye onye wearer. Iso nrọ n 'uzo bu uzo ogbugbu gi. Ị gaghị aga ebe dị anya iji mee ka ndị ọzọ mara ọkwa gị. Na egbu a, ọ dịịrị gị mfe ịkọrọ ụwa akụkọ gị n'enweghị ụda.
Ihe osise nke akụkụ ọ bụla nke #tattoo jiri nkwuwa okwu gwa gị ihe mere i ji tinye egbu ahụ na nke mbụ. Ọ na-adabere na nduzi na ntụziaka, na-egosi ihe ọma. Nke a bụ ihe mere a pụrụ ịhụ ọtụtụ ihe oyiyi nke compasses n'ụgbọ mmiri. Ihe a ma ama banyere igbu egbu bụ ihe ị ga-enwe mmasị mgbe ị hụrụ nke ọ bụla. Ụbọchị ndị a, ọ bụghịzi ndị ikom na-eji ya eme ihe kamakwa ụmụ nwanyị na-achọ ka ejiji.
Nchedo bụ otu n'ime ihe mere ndị mmadụ ji eji ya na ndị ọrụ ụgbọ mmiri, ha na-ahụ na ọ bụ ihe nnọchianya nke ọdịmma. isi iyi
Ọtụtụ mgbe, anyị na-ahụ ihe ịrịba ama nke compasses ndị na-etinye na ụfọdụ ụgbọ mmiri dị ka ihe ịrịba ama nke ọma. Akụkọ banyere ndị na-efu n'oge mmiri ebili mmiri ahụ enyekwara aka na-eme ka ndị na-eji ha na-egbu egbu egbugbu. isi iyi
A na-ekwere na site na nrịbama dị otú ahụ n'ahụ ahụ, enwere olileanya ịhụ ndị dị otú ahụ ndụ. isi iyi
E nwere ọdịiche dịgasị iche na ụdị ndị na-ejikọta na njide ndị a. E nwere compasses dịka compass compass, compass compass Vegvisir, compass compass, astro compass na kpakpando kpakpando ka aha ụfọdụ n'ime ndị compasses isi iyi
Ihe nke a pụtara bụ na ị nwere ike ọ gaghị abụ onye ọrụ ụgbọ mmiri iji egbu egbu. Ihe kachasị ewu ewu na ndị compasses bụ kọmpụ kpakpando nke a na-eji na-ezo aka na North Star. isi iyi
A na - eji North Star tupu teknụzụ na map abịa iji nyere ndị mmadụ aka inweta ntụziaka ha. isi iyi
Ụdị kpakpando na-anọchite anya ntụziaka, nduzi na ụzọ isi nweta nchekwa n'ụlọ. isi iyi
A na-ejikọta oge na kọmpụ ọnụ. Otu ụzọ dị mfe ịme nke a bụ itinye hourglass ma ọ bụ elekere na ntụgharị #design nke compass. isi iyi
Ụwa na map na-arụ nnukwu ọrụ dị ka compasses nke na-enyere ndị mmadụ aka mgbe nile ịchọta nduzi ha. isi iyi
A na-ejikwa mkpịsị ụkwụ na-anọchi anya nrọ ndị mmadụ. Site na igbu egbugbere ọnụ, a na-emesi gị obi ike na a gaghị egbochi nrọ gị ná ndụ. isi iyi
Echiche banyere egbugbere ọnụ kọmpụ mara mma
Ihe ga-enyere gị aka ilekwasị anya na ndụ gị. Ọ bụghị iwu na ị ga-ahapụ kọmpat gị n'enweghị ya na ya. isi iyi
Ịnwere ike itinye akara dị iche iche na ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ị bụ onye maara ihe ịchọrọ ịchọta na njedebe nke ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo tattooist, ị na-ezu ike n'ihi na ọ ga-enye gị ụdị ahụ nke ga-afụ ụfụ gị. A pụrụ itinye compass ahụ n'akụkụ ọ bụla nke ahụ gị. isi iyi
Ekele maka ụdị dị iche iche nke ndị na-egbu egbu na gburugburu ụwa. Ị pụghị ịhụ akara tattoo ma ghara ile anya ya abụọ. isi iyi
Enweghi uzo ozo nke na komputa apugh inyere anyi aka. Nke a bụ ihe mere ndị mmadụ ji eji akara tattoos dị ka nke a ugbu a. isi iyi
Enwere ike itinye aka na tattoo compass na akụkụ ọ bụla nke ahụ. Mgbe ụfọdụ, anyị na-ahụ ka mkpịsị tattoos dị iche iche dị oke egwu. isi iyi
A pụrụ ikwu na a pụrụ iji tattoo compass mee ihe atụ nke North Star na nke ahụ aghọwo mbinye aka nke ọtụtụ compasses. isi iyi
Onye ọ bụla nwere ike iji egbu a n'ihi na ọ na-egosi ma ọ bụ na-anọchite anya anya ma ọ bụ ntụziaka. Maka ndị na-eche maka ọrụ iji banye ma ọ bụ ndị meriri otu ọnọdụ, ha nwere ike iji egbu a na-echetara ha ọdịnihu maọbụ oge gara aga. isi iyi
Kedu ihe ị nwere ike ikwu banyere egbu a? Uche ahụ dị mma karịsịa site na nhazi ime ya. isi iyi
Ụta ụkwụ nwere ike ịchọta ndị inyom ma ọ bụrụ na ha nwere ike igbu egbu a na ya. E nwere ụdị dị iche iche ị nwere ike iji mee ihe mgbe ị na-ese tattoo compass n'ihe gị. isi iyi
Ọ dịghị ihe dịka ihe dị ka ụdị compass nke nwere ike igosi ozi dị ike maka gị dị ka nwanyị. A compass nwere ike ịga n'ụzọ zuru ezu iji jide n'aka na apata ụkwụ gị na-ekwu okwu n'olu dara ụda. isi iyi
Ụmụ nwanyị ga-ahụ ihe dị mfe a, na-emepụta egbukepụ compass. A na-ahụ ọtụtụ ihe na kọmpata iji nyere onye na-ekpuchi ọnụ aka na-eme nkwa ma kwere na ọtụtụ ihe. isi iyi
Enwere ike iji azụ mee ihe n'igosi nnukwu mkpado ngwugwu na azụ. Azụ bụ otu nnukwu ebe ebe egbugbu nwere ike ịmalite buru ibu ma na-emenye ụjọ n'ihi atụmatụ ndị mara mma. isi iyi
Ọ bụghị naanị ụmụ nwanyị ndị na-egbu egbu egbugbu. N'ezie, anyị maara na ụmụ nwoke bụ ndị nwere ike ịbịaru osisi ahụ mgbe ọ na-abịakwute ọnyà dị ka nke a. isi iyi
Pịa ebe a maka ihe ndị ọzọ Tattoo Tattoo
ndị na-egbuke egbukerip tattoosagbụrụ eboenyi kacha mma enyiegbu egbu egbudi na nwunyeenyí egbu egbuọdụm ọdụmngwusi pusiegbu egbu maka ụmụ nwokeUche obiazụ azụegbu egbu mmiriudara okooko osisiụkwụ akaokpueze okpuezeegbugbu egbugbumehndi imeweegbu egbu egbuzodiac akara akaraegbu egbuọnwa tattoosna-egbu egbuỤdị ekpomkpaechiche egbugbumma tattoosNtuba ntughariaka mma akaegbugbu maka ụmụ agbọghọAnkle Tattoosegbu egbu hennaakpụkpọ ụkwụ na-egbuke egbukeegbu egbu osisi lotusakara ntụpọegbu egbu diamondna-adọ aka mmanduru akwarannụnụdragọn dragọnakwara obiegbu egbu ebighi ebiEgwu ugoncha nrọakwara isiaka akaarịlịka arịlịkaụmụnne mgbuaka akandị mmụọ ozin'olu olu